दुर्भाग्यवश, त्यस्तो अप्रिय महिला 10-15% सामना, अस्थानिक गर्भावस्था रूपमा निदान। नाम नै लागि बताइएको छ। विवरण मा धेरै प्रश्न विचार गर्नुहोस्: के यो लक्षण छ यो अस्थानिक गर्भावस्था र थप कसरी दुख्छ गराउँछ।
अस्थानिक गर्भावस्था - को uterine पर्खाल गर्न ovum को संलग्न छैन। को fertilized अन्डा को cervix गर्न संलग्न गर्न वा पेट गुहा मा प्राप्त गर्न, ovary मा रहन सक्छ। सबै भन्दा साधारण अवस्थामा पर्खाल गर्न ovum को संलग्न समावेश गर्ने fallopian ट्यूब को। गर्भावस्था महिला स्वास्थ्य खतरनाक र जरुरी शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक जो atypical स्थानीयकरण, द्वारा विशेषता छ।
सामान्य गर्भावस्था मा, अन्डा तल वा गर्भाशय को शरीर संलग्न छ। छ कि गर्भाशय मा अन्डा छैन सार्स गर्भावस्था विपरीत। त्यो फरक स्थान छ: को fallopian ट्यूब, ovaries, भुँडी मा। यस्तो गर्भावस्था, विकास गर्न सक्दैन यो जीवन खतरामा पार्ने छ र यसको अवरोध लागि एक चिकित्सा संकेत छ। यो प्रारम्भिक चरणमा एक अस्थानिक गर्भावस्था को दुखाइ धेरै बलियो छ भनेर उल्लेख गरेको छ।
महिला आशङ्का विकृति सक्दैन। आखिर, यो चिकित्सकीय सामान्य गर्भावस्था देखि विभिन्न कुनै छ। धेरै मानिसहरू प्रश्न सोध्छन्: "को छाती जब दुख्छ गर्छ अस्थानिक गर्भावस्था? त्यहाँ कुनै पनि बिहान रोग छ? त्यहाँ निदाउरोपनको छ? "।
हो, अवश्य! यहाँ सबै नै: त्यहाँ महिनावारी ढिलाइ छ, mammary ग्रंथि वृद्धि mammary, चाल रूपरेखा चक्कर आना, कमजोरी, वाकवाकी, उल्टी, लालास्रवण सक्छ। एक गर्भावस्था को भयावह जटिलता एक रक्तस्राव हुन सक्छ, र चेतना को कमी, महिला तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ।
यो रोग को कारण को गर्भाशय गर्न ovary बाट fertilized अन्डा एक बाधा छ। यो अवरोध कम patency संग सम्बन्धित छ को fallopian ट्यूब को (सुनिंनु गर्भपतन, endometriosis, गर्भपात, प्रयोग एक गर्भनिरोधक एजेन्ट रूपमा IUD पछि), विकास असामान्यताहरु, साथै आन्तरिक प्रजनन अङ्गहरू, हर्मोन विकार वा गंभीर जन्म, परिवर्तन डिम्बाशय वा uterine क्यान्सर जो पछि ऊतक adhesions गठन गर्दै हुनुहुन्छ।
साथै, जोखिममा पनि उमेर समूह भन्दा महिला (35 वर्ष), यो उमेर मा एक महिला पर्याप्त "धनी" मा गर्भपतन को उपलब्धता दुवै somatic र gynecological रोगहरु र विकार, हर्मोन स्थिति मा परिवर्तन को सेट र अक्सर छ देखि समावेश इतिहास।
तपाईं कसरी चिन्नुहुन्न?
एक अस्थानिक गर्भावस्था दुखेको छाती परीक्षण स्ट्रिप्स सकारात्मक परिणाम देखाउन भने। विकृति शक गर्न गाह्रो छ। तथापि, hCG को स्तर निरन्तर उतार चढाव र एक निश्चित मिति अनुरूप, सामान्य देखि हटना हुनेछ।
यस्तो रोचक अवस्था, सामान्यतया भुँडी मा अप्रिय एक-पक्षीय दुखाइ सँगसँगै। अप्रिय अवस्था शरीर स्थिति परिवर्तन गरेर वृद्धि हुन सक्छ। एक अस्थानिक गर्भावस्था को समयमा दुखाइ एक menstrual cramping समान हुन सक्छ।
तर भविष्यमा भ्रूण को सम्मिलन स्थापना को मात्र विश्वसनीय विधि transvaginal पहुँचको अल्ट्रासाउंड निदान छ।
समसामयिक निदान र विधिहरू संग अस्थानिक गर्भावस्था को उपचार एकदम शरीरमा असर गर्दैन। र कौशलतासाथ पछि उपचार चयन गर्दा एक महिला एक गर्भावस्था को अवरोध पछि सबै 3-6 महिना को आमा बन्न प्रयास फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
को fallopian ट्यूब मा ovum रोक्न किनभने ऊतक को लोच यसको कमी को खतरनाक छ र आकार भ्रूण मा वृद्धि संग साथ फैलयो गर्न सकिन्छ। पाइप बिच्छेद भ्रूण Tissues र अन्डा संग रगत को peritoneal गुहा, जो peritonitis सक्छ प्रवेश, हुन्छ। साथै, खाली कुनै पनि अंग अस्थानिक गर्भावस्था र profuse रक्तस्राव मा तेज दुखाइ सँगसँगै हुनेछ। यो महिलाको जीवन endangers र डाक्टर को स्थिर पर्यवेक्षण अन्तर्गत एक गहन हेरविचार एकाइ मा तत्काल hospitalization आवश्यक छ।
अस्थानिक गर्भावस्था हटाउन सामान्यतया laparotomy सञ्चालन गरिएको छ। को ovum गर्न पेट सर्जन लाभ पहुँच एउटा सानो चीरा मार्फत। यस मामला मा, सबै साधन सेन्सर छन्, र मनिटर मा प्रदर्शित कुनै पनि हेरफेर विशेषज्ञ। गर्भावस्था को चरण आधारमा आफ्नो डाक्टर मात्र हटाउन सक्छ fertilized अण्डा, अन्डा क्षतिग्रस्त पुछ्ने वा पूर्ण fallopian ट्यूब को एक टुक्रा संग। को एक महिला ढिलो एक डाक्टर देख्न त, कम क्षति उनको स्वास्थ्य गर्न हुनेछ। एक अस्थानिक गर्भावस्था पछि दुखाइ लामो स्त्रीको स्मृति रहनेछ।
तर, उपचार त्यहाँ अन्त गर्दैन। reparative चिकित्सा undergo गर्न, साथै अस्थानिक गर्भावस्था को पुनरावृत्ति को सम्भव कारण निर्मूल गर्न आवश्यक छ। यो एउटा संक्रमण, सुनिंनु व्यवहार हर्मोनल असंतुलन पुनर्स्थापना आवश्यक छ।
समसामयिक निदान र समापन, साथै पछि उपचार र उचित पुनःस्थापना संग, महिला प्रारम्भिक चरणमा एक अस्थानिक गर्भावस्था को दुखाइ भूल गर्न सक्षम हुनेछ। यसलाई ठीक र एक स्वस्थ बच्चा जन्म दिन सक्षम हुनेछ।
त्यहाँ मामलाहरु fertilized अन्डा किनभने एक पाइप वाहिनी प्रदर्शन उल्लङ्घनको को गर्भाशय बाहिर संलग्न जो छन्। यो एक उलझन छ र एक अस्थानिक गर्भावस्था भनिन्छ। दुर्भाग्यवश, यो फल बच्न कुनै मौका छ। यो घटना आक्रान्त र उपेक्षा जीवन खर्च हुन सक्छ संग fraught रूपमा, महिला को स्वास्थ्य को लागि धेरै खतरनाक हुन्छ।
सामान्य अवस्थामा अन्तर्गत fertilized ovum को गर्भाशय मा कम र यसको पर्खाल संलग्न छ। तथापि, अस्थानिक गर्भावस्था विपरीत साँचो हो, यो एक दिशा मा यसलाई टाढा र संलग्न वा पाइप वा एक ovary, वा साधारण को पेट गुहा मा उत्प्रेरित गर्छ। भविष्यमा बच्चा को विकास को लागि एक सक्षम वातावरण कमी शरीर मा भ्रूण को बढ्दै provokes, जो उहाँले संलग्न गर्न। जसबाट आन्तरिक रक्तस्राव पैदा।
डिम्बाशय, ट्यूबल वा peritoneal मा एक गर्भावस्था विभाजन। यो सबै भ्रूण संलग्न स्थान मा निर्भर गर्दछ। निस्सन्देह, यस्तो अवस्थामा - एक चरम rarity र 100 को बाहिर 1-2 अवस्थामा हुन्छ।
त्यहाँ केही जोखिम कारक हो:
सञ्चालन गर्ने, पेट गुहा को क्षेत्र मा गरिएको छ भने;
हर्मोन पृष्ठभूमि को विफलता;
महिला प्रजनन अङ्गहरू को रोगहरु कारण;
प्रजनन अङ्गहरूको सौम्य वा घातक ट्यूमर।
यसलाई सामान्य रूपमा नै बाटो मा शुरू हुन्छ, र त्यस्तै आगम को पहिलो हप्ता। शंकास्पद लक्षण39 हप्तामा देखि देखा पर्न थाल्छन्। एक अस्थानिक गर्भावस्था को समयमा के दुखाइ? यी लक्षणहरू तिनीहरूलाई लागू हुन्छ।
aching संग दुखाइ सिंड्रोम, एक अस्थानिक गर्भावस्था को समयमा दुखाइ stabbing। यो भ्रूण को संलग्न को क्षेत्र मा, भुँडी हुन्छ। जब खाली वर्तमान दुखाइ हुन सक्छ।
अक्सर शरीर जहाजहरु, जहाँ fertilized अन्डा आक्रान्त र uterine रगत अलग हुन सक्छ। मूलतः महिनावारी सदृश, तर यति प्रशस्त छैन।
डाक्टर धेरै डिग्री यसलाई विभाजित। पहिलो - यो यसको वृद्धि बेला भ्रूण पाइप पर्खाल मा बाइट्स र यो आंसू गर्दा हो। दोस्रो डिग्री दुई प्रकार विभाजन गरिएको छ।
पहिलो - यो जहाँ दुखाइ सामान्यतया गंभीर छ एक अस्थानिक गर्भावस्था, आफ्नै बन्द भङ्ग गर्दा हो, र अन्डा को पेट क्षेत्र मा जारी छ। रक्तपातपूर्ण छुट्टी र पीडा सँगसँगै। को गर्भाशय बढेको, तर त्यहि अवधि छ। यो गर्भावस्था सामान्यतया भुँडी मा एक पक्षीय दुखाइ सँगसँगै छ। बेचैनी शरीर स्थितिमा परिवर्तन गरेर aggravated हुन सक्छ। अस्थानिक गर्भावस्था मा दुखाइ contractions वा menstrual ऐंठन सदृश। त्यहाँ आक्रान्त वा spotting।
द्वितीय - को fallopian ट्यूब को एक बिच्छेद। अक्सर 10 हप्ता समय7मा। यस मामला मा, यो तुरुन्तै मद्दत खोज्न महत्त्वपूर्ण छ! यो जीवन खतरामा पार्ने छ।
एक महिला एक असफल गर्भावस्था पछि प्रजनन पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ जो पुनर्वास, को एक पाठ्यक्रम undergo पर्छ। औसत मा, पुनःस्थापना पाठ्यक्रम महिला बच्चा को योजना गर्न सक्नुहुन्छ जो पछि छ महिना, रहन्छ।
यस गर्भावस्था छ किन जो छ?
को fertilized अन्डा गलत स्थानमा परिणामस्वरूप, को गर्भाशय पुग्छ, र आफ्नो असामान्य विकास। oocyte परिपक्वता को fallopian ट्यूब, ovary वा peritoneal गुहा मा ठाउँ लिन सक्छ। कारण हो:
Hypoplasia वा प्रजनन प्रणालीको असामान्य विकास।
अभाव वा हर्मोन को अतिरिक्त।
को fallopian ट्यूब वा तिनीहरूको innervation को उल्लंघन को Blockage।
को endocrine प्रणाली को रोगहरु।
एक अस्थानिक गर्भावस्था को सुरुमा सामान्य देखि भेद गर्न गाह्रो छ। महिला समान लक्षणहरू: वृद्धि भोक - यो दिन र रात, बिहान रोग हुन सक्छ - वाकवाकी तुरुन्तै हुन सक्छ वा पछि सानो, कमजोरी, निदाउरोपनको, स्तन कोमल, मासिक धर्म को अभाव। सुरुमा को 3-6 हप्ता पछि मात्र संकेत संकेत कि महिला गर्भावस्था विकृति भनेर देखाउन।
एक अस्थानिक गर्भावस्था को समयमा दुखाइ। सबै whining र कुनै शक्ति सबै यो सहन गर्दा भयानक स्थिति। एक अस्थानिक गर्भावस्था को समयमा के दुखाइ? मा Cramping को पेट क्षेत्र। सामान्यतया तिनीहरूले aching र प्रकृति मा cramping छन्। Urination पीडादायी, कहिलेकाहीं रगतले मिश्रित बन्नेछ।
आक्रान्त। पेट polost.Takzhe मा अस्थानिक pregnancies मा आक्रान्त उत्पन्न उपस्थिति र uterine रक्तस्राव बहिष्कृत छैन। यो कारण progesterone स्तर मा तेज गिरावट छ। यो महिला मा हर्मोन progesterone को गर्भाशय को वृद्धि बढावा छ। यो ब्लक uterine contractions र गर्भावस्था को समयमा यो menstrual चक्र रोक्छ।
तर्साउने एक राज्य। एक गर्भवती महिलाको रक्तचाप पर्छ। रक्तचाप मा ड्रप पनि progesterone हर्मोन स्तर मा एक कमी संग सम्बन्धित छ। अस्वस्थ छाला रंग profuse रक्तस्राव सुरु, र फलस्वरूप - चेतना को हानि। एक अस्थानिक गर्भावस्था को समयमा देखा पर्नेछन् र दुखाइ तल्लो पेट मा।
कसरी निदान गर्न?
सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण र परिचित लक्षण कम्तिमा एक को घटना एक महिला डाक्टर जान कारण हुनुपर्छ। अध्ययन प्रक्रियाहरु निदान गर्न तोकिएको गरिनेछ।
बढी कुशल इच्छा अल्ट्रासाउंड transvaginal द्वारा गरे। यस चिकित्सक मानव chorionic gonadotropin को एकाग्रता निर्धारण गर्नेछ। गर्भमा बाहिर एक गर्भावस्था - यदि 1500 को hCG स्तर, तर fertilized अन्डा को निदान parades फेला परेन, त्यसपछि निदान छ।
समस्या समाधान गर्न मात्र तरिका - यो सर्जरी हो। laparoscopy द्वारा वितरित। सञ्चालन समयमा, निश्चित भएको गर्भाशय बाहिर fertilized अन्डा हटाइयो। तपाईं समस्या प्लास्टिक सर्जरी आनंद छ भने। को fallopian ट्यूब को निष्ठा पुनर्स्थापना प्लास्टिक सर्जरी। Fallopian ट्यूब गर्भावस्था लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
अस्थानिक गर्भावस्था, प्रारम्भिक चरणमा निदान, यो रसायन चिकित्सा संग उपचार गरिएको छ। को ovum को क्रमिक अवशोषण methotrexate वहन। को fallopian ट्यूब खतरनाक हटाउन। यो बाँझोपन वा बारम्बार अस्थानिक गर्भावस्था को likelihood बढ्छ।
अस्थानिक गर्भावस्था को खतरा के हो?
माथि उल्लेख रूप मा, fertilized अन्डा को fallopian ट्यूब प्रवेश र त्यहाँ विकास गर्न थाल्छ। समस्या ट्यूब यसको पर्खाल पर्याप्त लोच र extensibility छैनन्, देखि र पनि अपेक्षाकृत सानो व्यास छ, भ्रूण विकास को लागि उपयुक्त छैन भन्ने छ।
क्रमशः (गर्भावस्था को 4-6-औं हप्ता) एक निश्चित बिंदु सम्म, chorionic villi यसको बिच्छेद हुन्छ, जो पछि पाइप, पर्खाल मा बढ्न र त्यहाँ रगतको एक बिच्छेद (peritonitis एक सम्भव थप विकास संग hemoperitoneum) को peritoneal गुहा मा छ। चिकित्सकीय यो प्रकट भएको छ, ठिक भएको पेट, paleness, चक्कर आना, चिसो, clammy, चेतना को हानि मा एक दुखाइ "चुपी"। तपाईं तोड्न गर्दा ठूलो पोत रक्तस्राव तत्काल सहायता आवश्यकता, जीवन खतरामा पार्ने हुन सक्छ।
केही अवस्थामा, यो पेट गुहा मा बहिष्कार छ, जो पछि ovum, पर्खाल तोडेर। को नैदानिक तस्वीर तोड्न पाइप को कि पारस्परिक, तर यो कम उच्चारण वा समय विकसित गर्न अब हुन सक्छ।
समय को एक निश्चित अवधि पछि, अस्थानिक गर्भावस्था दुखाइ को लक्षण कम, र त्यो सबै राम्रो छ भनेर सोच्छ, तर यो गलत समृद्धि छ। आखिर, रगत को पेट गुहा मा प्रवाह गर्न जारी छ। किन कारण ध्यान बिना यो राज्य छोड्न सक्दैन छ। एक महिला तुरून्त hospitalized र संचालित हुनुपर्छ। यो पनि गर्भवती यस्तो विकृति पछि स्वाभाविक रही को सम्भावना कम छ उल्लेख गर्नुपर्छ, र पुन: परिदृश्य बढ्छ जोखिम।
गर्भावस्था को समयमा शरीर तापमान
एक गर्भावस्था परीक्षण गलत हुन सक्छ र यो किन हुन्छ
महिला लोक उपचार मा उपचार thrush
जहाँ दोस्रो बच्चा लागि प्रसूति राजधानी आकर्षित गर्न? तपाईं कहाँ प्रसूति राजधानी क्षेत्रीय, क्षेत्रीय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
ठोस तरिकाले घन्टी: आकार, तौल र व्यास
कसरी चरण समुद्र तट मा Sireniks द्वारा चरण आकर्षित गर्न सिक्न
मासु संग सिमी - स्वादिष्ट जोडी